Hiiraan:-Waxaa maanta duhurkii gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaa kuwa ka socda dalka Jabuuti waxayna ka soo dageen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne .
Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ayaa waxaa ciidamadan ku soo dhamweeyey mas’uuliyiinta maamulka gobollka iyo kan Degmada gobalka Hiiraan waxaan hogaaminayey C/fitaax Xassan Afrax iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka DFKM iyo kuwa Itoobiya.
Guddoomiyaha maamulka gobollka Hiiraan oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan ciidamada dalka Jabuuti wuxuuna mid mid u gacan qaaday ciidamadii ka soo degan garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khaliif.
Saraakiil ka tirsan Midowga Afrika iyo dowlada Jabuuti ayaa shalay kaga sii horeeyey magaalada B/weyne ciidamada maanta la geeyey kuwaas oo gaaraya qiyaastii 100 askari oo ka socota dalka Jabuuti.
Midowaga Afrika ayaa wada qorshe uu balaarinayo ciidamada ka jooga dalka Soomaaliya waxaana u qorsheysan in ay gaarsiiyaan ciidamada AMISOM ilaa 20,000 .oo askari.